सरकारको नेतृत्व ओलीले र पार्टीको एकल नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ : थापा (भिडियोसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
सरकारको नेतृत्व ओलीले र पार्टीको एकल नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ : थापा (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०७६, आईतबार
‘काम नगर्ने र विरोध भएका मन्त्रीलाई हटाएर फ्रेश मन्त्री ल्याउछौं’
काठमाडौं, २९ भदौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य मणि थापालेसरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र पार्टीको नेतृत्व अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्नेगरि पार्टीभित्र छलफल अघि बढेको स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कार्यविभाजन हुनेपनि बताए । उनले भने,‘एक व्यक्ति, एक पदको प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । यसो हुँदा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र पार्टीको नेतृत्व अब प्रचण्डले गर्नुपर्छ भन्ने चरणमा नेकपाभित्र छलफल सुरु हुन्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टीभित्र अब कार्यविभाजनको अवधारणाबारे बहस सुरु भएको सुनाए । उनले भने,‘पार्टी एकताको समझदारीमा नै पार्टीको नेतृत्व एक अध्यक्षले र सरकारको नेतृत्व अर्को अध्यक्षले गर्ने भएकोले त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं । हामी पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन गरेर अघि बढ्छौं ।’
थापाले नेकपाको नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सही प्रस्तुती गर्न नसकेको हो कि भन्ने जिज्ञासा जनतामा पैदा भएको सुनाए । उनले भने,‘जनताले आफूले भनेजस्तो अनुभुति गर्न नसकेको कुरा केही सत्य हो । तर, गणतन्त्रलाई असफल बनाउने कोशिश भैरहेको छ । गणतन्त्रको विकल्प छैन् । यसमा पनि केही कमिकमजोरीहरु छन् । भएका कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर जानुपर्छ ।’
उनले नेकपाभित्र पनि केही कमजोरीहरु रहेको सुनाए । जतिसक्दो चाँडै पार्टी एकताले पूर्णता पाउने उनको विश्वास छ । त्यस्तै, उनले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न भैरहेको सुनाए । उनले भने,‘अहिलेपनि अराजकताका स्वर सुनिएका छन् । यी सबैलाई संविधानको भावानाअनुसार समझदारीमा ल्याउन आवश्यक छ ।’ विप्लव समूहसँग अघोषित रुपमा सरकारले वार्ता गरिरहेको थापाले जनाए । उनले भने,‘विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो नीति हो । अघोषित रुपमा वार्ता भैरहेको छ ।’
त्यस्तै, उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको भनेरपनि आवाज सुनिएको सुनाए । उनले भने,‘केही हदसम्म यो प्रवृत्ति देखिएको छ । हाम्रो पार्टी यो विषयमा गम्भिर छ । हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनसिलता अपनाएर अघि बढिरहेका छौं ।’ उनले सरकार अब सही ट्रयाकमा अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे ।
सरकारमा भएका केही मन्त्रीहरुको प्रस्तुति र कार्यशैली त्यति राम्रो नभएको भनेर बाहिर टिकाटिप्पणी भएको कुरा सत्य भएको सुनाउँदै अब फ्रेश युवाहरुलाई मन्त्री बनाउनेपनि थापाले जनाए । उनले भने,‘जनतासामू सर्भिस डेलिभरी हुनुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गरेर पनि अघि बढ्नुपर्छ । पार्टीभित्र त्यो विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ । केही मन्त्रीहरुको विरोध भएको छ । उनीहरुलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र अब प्रमुख टास्कको रुपमा यो विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ ।’ उनले वर्तमान सरकारलाई असफल भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । यद्धपी जति काम हुनुपर्नेथियो त्यति चाहीँ नभएको उनको पनि गुनासो थियो ।
थपिएका ११६ कोरोना भाइरसका संक्रमित को को (विवरणसहित)
काठमाडौ, ३० असार । नेपालमा आज ११६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । आज संक्रमितको
अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पूर्वमन्त्री पासवानको पनि आपत्ति, आत्माआलोचना गर्न आग्रह
काठमाडौं, ३० असार । बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
पक्राउ परेका पशुपति अन्नपूर्णा आश्रमका संस्थापक जगदीश बैद्यलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ३० असार । पशुपति अन्नपूर्णा आश्रम संस्थापक जगदीश वैद्यद्वारा पीडित समूहले उपचारको नाममा रोगबाट
अयोध्या तिर ध्यान नमोडौं, नक्शामा हक कायम गर्न पहल थालौं- विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौं, ३० असार । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अयोध्या तिर ध्यान मोड्न खोजेर संसदबाट
ओलीलाई भीम रावलको प्रश्न: यो बेला राम र अयोध्यावारे बहस गर्नुपर्ने हो ?
काठमाडौं, ३० असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘छाडा छाडन् खतरनाक हुने’ भन्दै बाबुरामले लेखे- संकटकालको खड्ग वहाँको हातमा
काठमाडौं, ३० असार । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खतरनाक बनेको
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘चीनको कठपुतली’ भन्दै कँग्रेस आईका प्रवक्ता सिंघवीले लेखे- ओलीले मानसिक सन्तुलन गुमाएको देखियो
काठमाडौं, ३० असार । भारतको विपक्षी दल कँग्रेस आईका प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीले प्रधानमन्त्री केपी
गोपाल किराँतीको दाबी : केपी ओलीलाई प्रचण्डको उपयोगिता सकियो (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष गोपाल किराँतीले सत्तारुढ दल
विहारमा फेरि लकडाउन, भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या नौ लाख नाघ्यो
एजेन्सी, ३० असार । नेपालसँग सीमा जोडिएको विहारमा फेरि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । विहार
क्रिसोपिली जीजस उड्ने सर्पमध्ये एक हो । जसको धेरै कम मात्रामा विष हुन्छ र मानिसको
रावणको पुजा गर्ने गाउँ
यो दुनियाँका सबै स्थानमा रावणको विरोध गर्दै पुत्ला जलाइन्छ । रावण बध गर्ने रामको पुजा